Gresy: Niteraka fanovana ny herisetran’ny polisy amin’ireo vehivavy mpifindra monina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Febroary 2019 6:24 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, polski, 繁體中文, 简体中文, Español, македонски, Ελληνικά, English
Nikorontana noho ny fanagadrana mpifindra monina fahatany sy ny tolotra am-bava karamain'ny governemanta sosialista vaovao hatramin'izao mba hanaja ny fahavononany hanavao ny polisy i Gresy. Roa andro talohan'ny Andro Iraisam-pirenena ho Fanafoanana ny Herisetra Mihatra amin'ny Vehivavy, nisy tranganà herisetra nataon'ny polisy tamin'ny renim-pianakaviana mpifindra monina sy ny zanany tao Athena izay niteraka fahatezerana ary nahatonga ny fampanantenan'ny governemanta vaovao hanavao ny polisy.
Mpanao gazety mpaka sary sady bilaogera, Craig Wherlock nandika ny tatitra tao amin'ny media Grika:
Vetivety dia navoakan'ny Cyberela tao amin'ny Twitter ny vaovao :
Niherisetra tamin'ny vehivavy 35 taona ny polisy mpampijaly olona(via @enetgr) @chrisochoidis. Inona no ho ataonao manoloana izany? Police
Nahazo fitakiana marobe mba handray andraikitra ny minisitry ny fiarovana ny olom-pirenena, Michalis Chrisochoidis. Tao amin'ny Twitter, nilaza i vivian_e hoe:
@chrisochoides Atoa minisitra, tafahoatra ny herisetran'ny polisy. Tokony horaisina ny sazy sahaza. Tsy misy hatak'andro @chrisochoides
Atsasakadiny taorian'ny sioka voalohany, sambany namaly mivantana ny olom-pirenena tao amin'ny Twitter ny biraon'ny minisitra.
@Cyberela @diakoptis @teacherdude @asteris @magicasland taorian'ny fiampangana ilay ramatoa 36 taona, nampanao fanadihadiana ataon'ny mpitsara ny foiben'ny polisy
@chrisochoidis hanontany anareo mikasika ny fivoaran'ny fanadihadiana isan'andro izahay
Taty aoriana, nanambara ny minisitra fa horoahina ireo polisy nahavita ilay heloka, ary nanomboka fakà-kevi-bahoaka ho fananganana birao manokana hanaramaso ireo tranganà herisetra ataon'ny polisy.